Aaladaha YouTube ee ugu Wanaagsan ee Smes ay tahay inay Adeegsadaan Maanta - SoNuker
YouTube waa mid ka mid ah aaladaha suuqgeynta ugu horreeya ee ganacsiyada maanta. Haddii aad rabto inaad hagaajiso wacyiga sumcadda, aad la shaqayso macaamiishaada, ama aad kor u qaaddo badeecad cusub, suuqgeynta YouTube waa aalad awood leh si loo gaaro dhammaan ujeeddooyinkaaga ganacsi.
Waxaa laga yaabaa inaad tahay Meherad Yar-Yar iyo Dhex-dhexaad ah (SME) oo aan weli ku dhicin goobta YouTube-ka. Ama, waxaad noqon kartaa SME oo raadineysa inaad sare u qaaddo kartidaada suuqgeynta YouTube. Si kasta oo ay tahay hadafkaaga suuqgeynta, waxaa jira aalad wax ku ool ah oo YouTube ah oo kaa caawineysa inaad gaarto natiijooyin aad u wanaagsan:
Kordhi sumcaddaada iyo ka-qaybgalka dhagaystayaasha fiidyowyada YouTube ee horumarsan. Abuuritaanka fiidyowyo xiiso leh ayaa muhiim u ah inaad naftaada u soo bandhigto dhagaystayaashaada si ka dhakhso badan kuwa kula tartamaya. Waxaa intaa dheer, abuurista fiidiyaha YouTube -ka waa mid aan qaali ahayn.
Samee noocyo kala duwan oo fiidyowyo ah si aad qiimo badan ugu gudbiso dhagaystayaashaada inta aad ka ilaalinayso waxyaabaha madadaalo leh. Qaar ka mid ah waxyaabaha ku guuleysta suuqgeynta fiidiyaha ee aad u adeegsan karto SME -gaaga waxaa ka mid ah:
Sida loo Qabto Fiidiyowyada -Fiidiyowyada-Sida loo-jecel yahay ayaa caan ah maxaa yeelay waxay u xalliyaan dhibaato dhagaystayaashaada. Raadi arrimaha iyo caqabadaha la xiriira badeecadahaaga ama adeegyadaada, oo ku horumari fiidiyowga How-To iyaga.
Fiidiyeyaasha Product - Baro macaamiisha alaabtaada ama adeegyadaada fiidyowyada sharraxaya. Waxaad si faahfaahsan u sharxi kartaa badeecadaada/ adeegyadaada, adoo maraya sifooyinkooda, ujeedadooda, iyo faa'iidooyinka macaamiisha.
Liisaska - Liisaska waxay u gudbiyaan wax badan oo ku saabsan meheraddaada hab soo jiidasho leh oo si fudud u fahmi kara dhagaystayaashaada. Waxaad isticmaali kartaa sawir -gacmeedyada iyo sawirrada si aad uga dhigto liisaskaaga madadaalo iyo wargelin.
Fiidiyowyada BTS -Fiidiyowyada BTS ama Muuqaalka gadaashiisa ayaa ah hab aad u fiican oo lagu muujiyo cunsurka aadanaha ee sumaddaada. Fiidiyowyada BTS waxay u soo dhoweeyaan dhagaystayaashaada dhaqankaaga shaqada iyo dadka sumaddaada ka dhiga waxa uu yahay.
Kani waa aaladda rasmiga ah ee YouTube ee maareynta fiidiyahaaga iyo kanaaladaada. Waxaad u adeegsan kartaa aaladda sidii app moobiil ah ama ka geli kartaa shabakadda.
Qalabkani wuxuu bixiyaa barxad loogu talagalay maareynta dhammaystiran ee kanaalkaaga YouTube. Waxa kale oo ay bixisaa gorfaynta waqtiga dhabta ah si ay kaaga caawiso inaad gaadho go'aamada suuq-geynta ee ku salaysan xaqiiqda.
Dulmar degdeg ah oo ku saabsan qalabkan:
Hel xogta waqtiga-dhabta ah oo ay ku jiraan fiidyowyada sare, tirinta aragtida, waqtiga ilaalinta iyo dakhliga la qiyaasay.
Qiimee heerka ka -qaybgalka dhagaystayaasha oo leh tirakoob celcelis ahaan wakhtiga fiirinta, fiidyowyada sare iyo muddada daawashada
Qiimee soo -gaadhista fiidiyaha oo leh aragtiyo sida tirooyinka CTR, riyooyin, daawadeyaal gaar ah, iyo faahfaahinta isha taraafikada.
Ku guulayso aragtiyo wanaagsan dhagaystayaasha bartilmaameedka leh faahfaahinta daawadeyaasha gaarka ah, macmiisha, tirada dadka isticmaala, iyo jadwalka daawashada isticmaalaha.
Soo hel qiyaas dakhli oo leh aragtiyo lagu cabiro cabbirrada sida qiimaha halkii mayl, dakhliga halkii mayl, iyo fiidyowyo leh qiime lacageed oo sarreeya.
Si fudud u tafatir fiidiyowyada kuna dar cinwaan hoosaadyo si aad u kordhiso gaarista.
Dib u eeg, shaandhee, oo maamul qaybta faallooyinka kanaalka.
TubeBuddy waxaa loo heli karaa aalad fidinta biraawsarka. Qalabkan aadka u fiican wuxuu kaa caawin karaa ujeeddooyinka suuqgeynta ee kala duwan ee kanaalkaaga YouTube.
Waxay ka caawisaa cinwaanka weydiimaha isticmaalaha iyo faallooyinka kanaalkaaga YouTube. Waxaad dejin kartaa aaladda si aad u shaandhayso faallooyinka ku saleysan xuduudaha sida ku habboonaanta, spam, diidmada, iyo inbadan.
Waxay kaa caawineysaa inaad aqoonsato ereyada muhiimka ah ee fiidiyahaaga si fiidiyowyadaadu u kasbadaan darajooyin ka wanaagsan oo ay u helaan aragtiyo badan.
Waxay awood u siisaa tijaabada fiidiyaha A/B si loo fahmo sida fiidiyowyadaadu u shaqeyn doonaan.
Wuxuu caawiyaa aqoonsiga sumadaha fiidiyaha ee caanka ah. Waxaad u adeegsan kartaa aragtiyaha summada si aad ugu abuurto summadaha diiradda saaraya oo fiirinaya fiidiyahaaga.
Adigoo wata TubeBuddy, waxaad ku wanaajin kartaa fiidiyahaaga si aad u gaarto ugu badnaan. Qalabkan waxaa lagu heli karaa noocyo bilaash ah oo lacag lagu bixiyo. Waa hab aan qaali ahayn oo lagu daro geeska istiraatiijiyadda suuqgeynta YouTube -ka.
Suuqgeynta YouTube -ka runtii waa istiraatiijiyad aad u wanaagsan si loo gaaro joogitaan summad leh. Laakiin istiraatiijiyaddu waxay shaqaysaa oo keliya markaad abuurto fiidiyowyo tayo leh oo ku habboon dhagaystayaashaada. Aaladaha YouTube ee kore waxay kaa caawinayaan inaad fahanto dhagaystayaashaada oo aad soo saarto fiidiyowyo si dhab ah wax uga qabta baahidooda.
Ka dhig suuqgeynta fiidiyahaaga mid guuleysata oo ku kori sumaddaada aaladahaan YouTube-ka ee aadka u waxqabadka badan.
Aaladaha YouTube ee ugu Wanaagsan ee Smes ay tahay inay Adeegsadaan Maanta waxaa qoray SoNuker Writers, 26 August 2021
Sidoo kale SoNuker
Sidee Loogu Bilaabaa Podcast Guul YouTube-ka?
YouTube-ka waxaa laga yaabaa inuu ku dhaco maskaxda dadka markay raadinayaan fiidiyow ama "muusig" ah, laakiin shabakadda bulshada ayaa sidoo kale si tartiib tartiib ah u soo jiidanaysa sidii barta loo yaqaan 'Podcast platform'. Dhawr abuurayaal YouTube ah ayaa adeegsanaya…
Sidee loo Abuuraa Faan-Suuq-geynta YouTube-ka?
YouTube wuxuu leeyahay in kabadan 126mn isticmaaleyaal bille ah, oo markaa noqda midka ugu caansan suuqgeynta fiidiyoowga Mareykanka. Shabakada bulshada sidoo kale waxay caan ku tahay dhalinyarada da'da yar, gaar ahaan inta udhaxeysa 15 iyo 25….
Sidee Looga Bixiyaa Waxa Ugu Fiican YouTube Haashtaag?
Waxay ahayd 2016 markii fiidiyowga la wadaago fiidiyoowga barnaamijka YouTube soo saaray hashtags. Laakiin sanadihii la soo dhaafay, hashtag-yada YouTube-ka ayaa si aad ah isu beddelay si loo wanaajiyo dhammaan waayo-aragnimada fiidiyowga ee raadinta daawadayaasha. Ha iloobin, madal…
Kor u kaca iyo hoos u dhaca nolosha sida Abuuraha YouTube
Waxyaabaha Ugu Sarreeya ee Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Muusiga YouTube
Waa maxay sirta guusha maaliyadeed ee YouTube?